kuyedza e-commerce mawebhusaiti
Kuru Qa Kuedza E-commerce Webhusaiti
Kwayedza E-commerce Mawebhusaiti inoda ruzivo rweyese nzira dzekuyedza webhu uye iyo e-commerce domain.
Mazhinji E-commerce Webhusaiti anogovera yakajairika theme uye chimiro, i.k.
Tsvaga Zviwanikwa Peji
Chigadzirwa Mapeji Peji
Order Fomu Peji
Order Kusimbisa Peji
Login Fomu Peji uye Akaundi Mapeji
Ehezve, kune mamwe akawanda mapeji pane yakajairwa e-commerce webhusaiti, asi chikuru musimboti rwendo rwevashandisi runosanganisira kubata mapeji ari pamusoro uye ndipo panofanirwa kuyedzwa e-commerce mawebhusaiti. Rwendo rweKubuda.
Aya mapeji e 'kumberi-kumagumo' anogona kunge achitaurirana ne 'kumashure-kumagumo' ewebhu masevhisi, senge Chigadzirwa Kutsvaga Sevhisi, Zvemukati Service, Booking Injini, Kubhadhara Services, maAccounts Services, nezvimwe. Naizvozvo, zvakakosha pakuyedza e-commerce mawebhusaiti. kuti isu tinoyedza yega masevhisi mukuzviparadzanisa pamwe nekubatanidzwa sehurongwa hwese.
Chaizvoizvo rwendo rwevashandisi rwunoyerera rwaizotanga paji rekutanga, kana peji rinomhara chigadzirwa, kutsvaga chigadzirwa, kuongorora chigadzirwa, kuwedzera zvigadzirwa (s) kungoro yekutengera, zadza maodha ehurongwa uye ruzivo rwekubhadhara uye kuendesa iwo odha.
Pfungwa dzekuyedza E-commerce Webhusaiti
Tambokurukura matipi uye nhungamiro yekuyedza webhu kunyorera uye zvakajairika bvunzo nzira uye bvunzo nzira dzekuyedza webhu kuyedza iyo inoshandawo kuyedza e-commerce mawebhusaiti.
Muchikamu chino, isu tinoongorora mamwe akajairwa ebvunzo kesi ayo akanangana nekuyedza e-commerce mawebhusaiti. Pfungwa dzakaratidzwa pano ndedzimwe generic yepamusoro-chikamu bvunzo kesi dzinoshanda kune mazhinji e-commerce mawebhusaiti, uye iwe unogona kushandisa gwaro iri kutanga nekuyedza e-commerce mawebhusaiti.
Kuedza yekutengera Ngoro
Ngoro dzekutenga ndeimwe yezvakakosha zvee-commerce webhusaiti uye nekudaro inoumba iyo yepakati pekuyedza e-commerce mawebhusaiti. Iyo inobvumira vatengi kusarudza uye kuchengeta akawanda zvinhu mumotokari uye kuzvitenga zvese kamwechete.
Mazuva ano, ngoro dzekutenga dzave 'dzakangwara' mupfungwa yekuti vanoyeuka izvo zvinhu zvaunochengetera mazviri kuti ugone kuzvitora pane rakazotevera zuva kana kunyange kubva kune chimwe chigadzirwa.
Muzviitiko zvakawanda, makuki anoshandiswa kuchengetera data yengoro kana kana mushandisi aine account inoshanda uye akapinda mukati, id yedhisheni inogona kuchengetwa pamusoro pemushandisi mudhatabhesi. Chero nzira, kune mamwe makiyi ebvunzo bvunzo ayo anofanirwa kuve chikamu chekuyedza yekutenga ngoro.
Wedzera chinhu chimwe kungoro - ngoro inofanirwa kuvandudzwa pamwe nechinhu chine zita chairo, mufananidzo, uye mutengo.
Wedzera huwandu hwechinhu kubva mungoro - mutengo unofanirwa kuvandudzwa kuratidza iwo chaiwo nhamba.
Wedzera chinhu chimwe chete kakawanda - panofanirwa kuve nechinhu chimwe mungoro, asi huwandu hunofanira kuratidza huwandu hwezvakawedzerwa uye mutengo wese unofanirwa kuratidza huwandu hwemutengo wechinhu chimwe nechimwe.
Wedzera zvinhu zvakawandisa zvemhando dzakasiyana - Pachinhu chimwe nechimwe chakawedzerwa, tinofanirwa kuona rinoenderana zita, mufananidzo, uye mutengo uye mutengo wese wezvinhu zvese.
Bvisa zvimwe zvinhu mungoro - ngoro inofanirwa kugadzirisa ichiratidza zvinhu zviripo mungoro, mutengo wese unofanirwa kuratidza iyo nyowani.
Bvisa zvinhu zvese mungoro - chingoro chakaringana chinofanirwa kunge chiri zero, hapana zvinhu zvinofanirwa kuratidzwa mungoro.
Dzvanya pane chinhu chiri mungoro - isu tinofanirwa kukwanisa kuona rumwe ruzivo nezve icho chigadzirwa isu tangodzvanya kungava popup kana kuendesa kune icho chigadzirwa peji.
Wedzera chinhu (s) kungoro, vhara bhurawuza uye uvhurezve saiti imwechete - zvine musoro, ngoro inofanirwa kuramba ichichengeta zvinhu zvako. N.B izvi zvinonyanya kuenderana nezvinodiwa pamabatiro engoro.
Coupons - tinoda kutarisa kuti mutengo wengoro wakadzikiswa here patinoisa coupon uye kwete kudzikisirwa patinoisa koponi isiriyo kana yapera.
Yekutsvaga Fomu, Kuronga, Kuchenesa, Kufungisisa
Iyo yekutsvaga fomu inowanzo kuve iripo pane akawanda mapeji kubvumira vashandisi kutsvaga zvigadzirwa chero ivo vari pane saiti. Naizvozvo, zvakakosha kuti chimiro chekutsvaga chiedzwe pamapeji anoshanda.
Kazhinji kodhi yekodhi yemutsva inoshandiswa zvakare mumapeji akawanda kana matemplate, kana inogona kuve chikamu chechikamu chemusoro chinoratidzwa pane saiti yese. Kana zvirizvo, hunhu hwechinhu chekutsvaga chinofanira kunge chakafanana kwese kwazvinoitika uye kumhanyisa zviitiko zvese zvekuyedza pamapeji ese kuparara kwekurovedza muviri.
Kuyedza e-commerce mawebhusaiti kwaisazove kunonakidza pasina kuyedza yakanyanya kufema peji pane saiti, iyo Yekutsvaga Mapeji Peji.
Kana isu tichitsvaga chigadzirwa, tinobva taendeswa kune iyo Yekutsvaga Mapeji Peji (SRP) nezvose zvakakosha zvinhu zvataitsvaga. Pane zvinhu zvakawanda zvekutarisa uye zvakawanda maficha ekuyedza, asi izvo zvitatu zvinhu zvakakosha uye zvakakosha zvakanyanya kune SRP kurongedza, kusefa uye kufungidzira.
Zvakakodzera zvigadzirwa - tarisa kuti zvigadzirwa zvakaratidzwa zvinoenderana here nezvakatsvaga.
Chigadzirwa ruzivo - zvigadzirwa zvinofanirwa kuratidza mufananidzo, zita, mutengo uye pamwe ratidziro yevatengi uye nhamba yeongororo.
Huwandu hwezvigadzirwa pa peji - tarisa kuti huwandu hwezvigadzirwa pa peji rinoenderana nezvinodiwa.
Kufungidzira - tarisa kuti zvinhu zvese zviri papeji rinotevera zvakasiyana nepeji rapfuura, i.e. hapana zvakapetwa
Kuronga - panogona kuve nesarudzo ina kana shanu dzaungasarudze kubva pakudonhedza menyu. Kuronga kunowanzo kuve kusarudzika-kusarudzika, i.e. iwe unogona kurongedza neparamende imwe chete.
Kuronga uye Kugadzirira - kana paine zvigadzirwa mumapeji akawanda paunorongedza neparamende, iyo yekuraira irongeri inofanirwa kugara paunenge uchipa paginate, kana zvimwe zvigadzirwa zvakatakurwa (kana iri mutoro weAjax)
Kuchenesa - zvakasiyana nemhando sarudzo, mafirita sarudzo akasarudzika, ndiko kuti iwe unogona kusefa neakawanda paramende. Iyo yakanaka pfungwa yekutsvaga imwe mafirita uye akawanda mafirita sarudzo.
Kuchenesa uye Kufungidzira - Zvakare, izvi zvakakosha, patinosefa mune rimwe peji, sezvazviri, patino paginate tinoda kuti firita ishandiswe mukati mese.
Kuronga nekusefa - yakakosha bvunzo kesi kusanganisa iyo yekumisikidza uye yekusefa sarudzo pamwe chete, i.e. Sefa nemutengo uye wozogadzirisa nemutengo wepamusoro-kusvika-pasi, kana imwe nzira kutenderera. Ipo iwo wega maficha ari ega anogona kushanda nemazvo, kana akasanganiswa nechimwe chinhu, mashandiro eimwe kana maviri maficha anogona kutyoka, saka zvakakosha kuti titarise mhedzisiro patinosanganisa kusefa nekurongedza.
Kuronga, kusefa, uye kufungidzira - uku kutarisa kuti kana mhando nemasefa zvaiswa, vanosara patiri paginate kana zvimwe zvigadzirwa zvikaiswa.
Gadzira Akaunti uye Login
Mamwe ma e-commerce mawebhusaiti anotendera iwe kuti utenge chinhu semushanyi, i.e. pasina kukosha kwekugadzira account, uyezve nhanho yekusarudzika yekugadzira account kana odha yaiswa.
Kana account ikagadzirwa, mushandisi anogona kupinda mukati chero nhanho mukati merwendo rwekutenga. Izvo zvakakosha kuti isu tiongorore aya ese misiyano parwendo rwevashandisi kana tichiyedza e-commerce mawebhusaiti.
Tenga chinhu semushanyi - Kana iyo saiti ichibvumidza, edza kuti iwe unogona kutenga chinhu pasina kuita account.
Maakaundi aripo uye matsva - tenga chinhu neakaundi account uye neakaundi ichangobva kugadzirwa.
Gadzira account uye pinda mukati usati watenga - uku kuongorora kuti chinhu chaunotenga chikawedzerwa uye chakabatana neakaundi account. Zvakare, iwe haufanire kukumbirwa kuti upinde zvakare kana iwe watove watopinda.
Kupinda kunodzoreredza - tarisa hunhu hwekupinda mukati memapeji akasiyana. Mamwe mawebhusaiti anodzoreredza mushandisi ku peji rimwe chete kwavakadzvanya chinongedzo chekupinda uye mamwe masayiti anotungamidza mushandisi kumapeji eakaundi. Izvi zvinofanirwa kuyedzwa zvakakwana.
Login chikamu - paunopinda mukutarisa kuti unogara uri mukati mukati paunenge uchitarisa zvigadzirwa. Zvakare, iwe unofanirwa kuyedza hunhu kana mushandisi asingabatanidze pamwe newebsite kwenguva yakati. Chikamu chichaguma here mushure menguva yakati? Ita shuwa kuti mushandisi anga atove akabuda kunze mushure memusangano nguva dzabuda.
Kupinda uye Kubuda - kana iwe watopinda mukati, pinda kunze uye uve nechokwadi chekuti wabuda uye kuti haugone kuwana chero eakaundi mapeji.
Kubhadhara chikamu chakakosha chekuyedza e-commerce mawebhusaiti. Mushure mezvose, izvi ndizvo zvinobvumidza vashandisi kutenga zvinhu zvavo pasina chikonzero chekufonera nhamba kuti vaise odha yavo.
Mhando dzekubhadhara - Mhando dzakasiyana dzekubhadhara dzinofanirwa kuongororwa dzese. Kiredhiti Kadhi, Paypal, Bhengji Inoshandura, Zvimisikidzwa, nezvimwe
Kadhi Ruzivo Kuchengeta - iyo saiti inochengetera vatengi kadhi rechikwereti ruzivo? Kana zvirizvo zvakachengetedzwa zvakachengeteka? Ndizvo PCI inoenderana ?
Kana isu tichiisa odha, pane zviito zvakawanda izvo vashandisi vanogona kuita zvine chekuita nekutenga kwavo. Kwayedza iyo post-kutenga mashandiro zvakare yakakosha chiitiko chekuyedza e-commerce mawebhusaiti. Izvi zvinogona kuva:
Kanzura odha kana shandura huwandu hweodha yacho
Wongorora chako chazvino odha uye nhoroondo yezvinhu zvakatengwa
Shanduko kuaccount, senge kubhadharisa kero, kero yekutumira, password, ruzivo rweprofile senge zita, kero yeemail uyezve kudzima account.
Pasina mubvunzo kuti kuyedza e-commerce mawebhusaiti kunonetsa uye kunoda hunyanzvi hwakawanda. Chinyorwa ichi chingori chidimbu cheaizi yechando yezvese zvinoenderana zviitiko zvekuyedza izvo zvinogona kuitwa kana kuyedza e-commerce mawebhusaiti uye inogona kushandiswa sepokutangira.
Pane zvakawanda zvakawanda zvinoshanda kuti zviongororwe sechikamu chekuyedza e-commerce mawebhusaiti senge:
Chigadzirwa carousels uye zvigadzirwa zvinokurudzirwa.
Kururamisa kuratidzwa kwemashoko pane Chigadzirwa Mapeji Peji iyo inowanzo gutsikana inorema.
Dhatabhesi yechigadzirwa - iyo data inoshandurwa sei mushure mekunge chinhu chatengwa?
Warehouse Sisitimu - imba yekuchengetera kana yechitatu-bato inoziviswa kana paiswa odha?
Kubata mutengi, email yekusimbisa, zvemukati meemail, kudzoka, zvichemo, nezvimwe…
Izvo zvinonyanya kukosha pakuyedza e-commerce mawebhusaiti, ndeyekuona kuti yega yega ficha yaita nenzira kwayo zvido zvayo.
Heano maitiro aunogona kuwana mahara Pokecoins kubva kuGoogle Play Chitoro
Yese Samsung Galaxy Note 7 mafoni ekurambidzwa kunhandare dzendege dzeU.S.
OnePlus Nord CE 5G Ongororo